Ihe Anyị Mụtara Banyere Nnweta Ahịa site na Swing for the Fences | Martech Zone
Kpọrọ anyị pụọ na ballgame? Ee! 3DplusMe, ụlọ ọrụ nwetara site WhiteClouds, abụwo onye nyere ikikere nke MLB kemgbe afọ abụọ gara aga, na -emepụta ahụmịhe mmekọrịta mmekọrịta 3D na ngwaahịa 3D agba zuru oke maka ndị na-agba bọọlụ. Anyị wuru ma nye teknụzụ nke na-enyere ndị bịara MLB aka ịdebanye aha ha na otu egwuregwu kachasị amasị ha ma "bụrụ" onye ọkpụkpọ site na njide anyị iji bipụta ikpo okwu. Fans na-ahọrọ otu ha, edo, aha jersey, nọmba ma bụrụ na n'ime sekọnd ha na-ahụ onwe ha dị ka ndị egwuregwu maka otu egwuregwu kachasị amasị ha. Site n'ebe ahụ ha nwere ike ịtụ ụdị 3D e biri ebi zuru ezu nke ewepụtara na ụlọ ha.
3DplusMe bụkwa usoro ikpo okwu maka ahụmịhe 3D-iji-ebipụta ahaziri iche na mkpọsa. Ọbịa ghọọ ihe egwuregwu ha kachasị amasị ha, akara ngosi, dike egwuregwu, egwuregwu vidio ma ọ bụ agwa nkiri, na ndị ọzọ, na ndị na-ere ahịa dịka Target, Toys R Us na Wal-Mart.
Nyere ihe ndekọ anyị na gburugburu abụọ, anyị elekwasị anya ma mụta ihe na-adọta ma na-agbanwe ndị ahịa, ma na-eche na mmụta ndị a nwere ike itinye n'ọrụ sara mbara, n'agbanyeghị gburugburu. Nke a bụ ihe nyocha na ahụmịhe anyị na-egosi:
Ndị ahịa na-enwe ike ịzụta mgbe ị mepụtara ahụmịhe nke na-ewetara ha na akụkọ nke ngwaahịa a. Mgbe ndị Fans nọ na ihe omume, ha na-etinye mmụọ ha n'ime ọdịnaya nke na-akpali omume ha maka ahụmịhe ngwaahịa.
Na ọkọlọtọ mkpọsa gburugburu ebe obibi, mgbe onye ọbịa na-agafe ngwaahịa, 15% nke ndị Fans na-etinye aka na ahụmịhe 3D na ịzụta mkpọsa na ASP nke $ 59.00. Ahụmahụ ahụ na-enye onye ọ bụla ohere ịnwale ya n'efu ma hụ onwe ha dị ka dike kachasị amasị ha ma ọ bụ ihe egwuregwu ndị ọzọ. Ọrụ nke ahụmịhe ahụ bụ ịkwọ ndị fans ịzụta. Ndị a bụ ọnụọgụ siri ike ma e jiri ya tụnyere ọnụego ntụgharị ọnụahịa ọkọlọtọ nke 1-2%.
Na mmemme ebe ndị nnọchi anya na-eguzosi ike n'ihe nọchitere anya, 60% nke ndị na-azụ na-azụta na ASP nke $ 135. Egosiputa ihe omuma atu zuru oke nke ngbanwe nke uzo a n'ámá egwuregwu na World Series, MLB All Star Game Fan Fest, Training Training na gburugburu ihe omume ndi ozo. Ndị Fans chọrọ ịbụ akụkụ nke otu ahụ na ahụmịhe 3D na-enye ha ohere ahụ.
Igodo isi site na echiche anyị:
Ahụmahụ mgbanwe na-abawanye ntụgharị
Mgbe ị nwere ike iru ahụmịhe ngwaahịa nke mepụtara oge aha na mmekọrịta mmekọrịta mmụọ, ndị mmadụ chọrọ ịzụta. Na ọkọlọtọ mkpọsa gburugburu, ebe ọ na-esiri ọdịnala ike ịbawanye ntụgharị, anyị egosila na ị nwere ike ibuli ọnụego gị site na ịmepụta ahụmịhe "mkpọsa" maka ndị ahịa. Anyị egosila na mgbe ị nọ na ihe omume dịka World Series, All Star games, Comic-con, na Super Bowl ị nwere ike ịbugharị ntụgharị dị elu site na ahụmịhe na-akpali akpali.
Njikọ mmetụta uche na-eme ka akụkọ na-akpata bụ isi ihe na-akpata ịre ahịa ahịa. Ahụmịhe anyị enyela ụfọdụ ndụmọdụ dị mfe nke ndị na-ere ahịa nwere ike iji rụọ ọrụ na mkpọsa ahịa ọ bụla.
Jiri akụ gị na ndị mmekọ azụmaahịa mepụta "ahụmịhe mgbanwe" nke dabara na akara gị. Ndị a nwere ike ịbụ nnukwu emume ọha na eze ma ọ bụ obere mmekọrịta chiri anya na ụlọ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, anyị na Ubisoft rụkọrọ ọrụ iji nye ndị Fans ikike ịghọ "Arno" mgbe Assassin Creed Unity bidoro na Ubisoft Lounge na E3 (Electronic Entertainment Expo). Nke a nyere ahụmịhe na-enweghị atụ nye ndị Fans jikọtara na akụkọ ihe merenụ.
Mepụta ahụmahụ nke na-ewuli na atụmanya na obi ụtọ site na ndị ahịa nkeji na-etinye aka n'ahịa ikpeazụ. Iji maa atụ, site na mgbe onye ofufe batara na ebe 3DplusMe n’elu pavilion, a rafuru ha. Ọ na-amalite site n'ịhụ na ihe niile na-aga n'ihu kwekọrọ na akụkọ sitere na akara ngosi nke na-akpọ ndị ọbịa òkù ka ha gaa "Otu ị ga-adọrọ mmasị na otu ndị ọkacha mmasị gị," na-aga n'ihu ịhọrọ nhọrọ nke ahaziri nke ọ bụla ma kwụsị na ngosipụta dị egwu ikpeazụ (egwu gụnyere) agwa. Ahụmahụ mgbanwe a kwekọrọ na mmetụta nke ndị bịara ihe omume chere.
Nye onyinye aghụghọ. Ogige ntụrụndụ na-ama na mgbe ha gosipụtara foto nke onye ọ bụla ọbịa na-ewu ewu na-enweghị ibu ọrụ ịzụta; ihe ike mmetụta uche siri ike ga-eme na ire ahịa ka a ga-eme! N'otu aka ahụ, na ọdụ nyocha anyị, ndị ahịa nwere ike ịlele ihu ha n'efu, wee hụ ozugbo ngwaahịa ikpeazụ ga-adị, nke na-enyere aka ịzụta.
Nwalee ma bulie: Ozugbo ị nwere ahụmịhe metụtara akụkọ ị ga-anwale ma bulie iji hụ na ị na-eme usoro nke na-eduga ndị ahịa site na ahụmịhe n'ụzọ dị egwu. Ikwesiri ịhazi ihe ga - enyere gị aka ịhụ ihe na - arụ ọrụ ma gaa n’ihu na - emeziwanye na usoro ahụ.
Ndị na-ere ahịa kachasị mara na ịbubata ndị ahịa n'ime akụkọ banyere ngwaahịa a bụ ụzọ kachasị mma iji chụọ ntụgharị na iguzosi ike n'ihe nke n'ikpeazụ na-abawanye ahịa. Mgbe ịchọrọ ịgbanye maka ngere ị ga-ebili ịba ọtụtụ oge, mụta site na ọkwa ọ bụla ma mesịa ị ga-akụ ọsọ ụlọ.
Tags: Ntinye 3d3dplusmena-arịọ ọnụahịa mkpọsaahụmahụ ahịakeonweahaziri ngwaahịa
Cydni bụ onye ọchụnta ego na-eduga ngwaahịa na-elekwasị anya na iwulite ngwaahịa na ịchụ ndị ahịa ahịa. Ọ bụ ugbu a na President nke Retail na Chief Product Officer na WhiteClouds, Onye nwetara 3DplusMe ebe obu onye isi na onye nchoputa. Ọ rụrụ ọrụ na teknụzụ azụmaahịa maka Disney ma soro nnukwu ụlọ ọrụ na ndị na-ere ahịa rụọ ọrụ na ụwa iji wepụta ngwaahịa gụnyere Marvel, Star Wars, MLB, MLS, Warner Brothers, Dreamworks, NFL, Disney Stores, Target, Walmart na Toys R Us. Ọ bụ Onye Ọrụ Na-arụ Ọrụ na Mercato, ụlọ ọrụ na-eto eto, ngalaba maka Goldman Sachs 10k obere azụmaahịa na onye nchoputa na Onye isi nke Women Tech Council. Cydni nwere akara ugo mmụta na nchịkwa azụmahịa na bachelor na sayensị kọmputa na Mahadum Brigham Young.